pigmenta fluorescent ho an'ny pirinty manohitra ny fanadiovana
Pigmentera UV fluorescentizy io dia tsy misy loko, ary rehefa avy mifoka ny herin'ny hazavana ultraviolet (uv-365nm na uv-254nm) dia mamoaka haingana ny angovo ary mampiseho vokarin'ny fluorescent miloko mazava. Rehefa esorina ny loharano maivana dia mijanona avy hatrany izy ary miverina amin'ny fanjakana tsy hita maso tany am-boalohany.
Fandoko mena mena avo lenta ho an'ny horonantsary tranoona
Loko mena mena be dia loko vita amin'ny fluorescent avo lenta amin'ny fandokoana plastika, manana toetr'andro tsara izy io ,, Fiorenan'ny hafanana ambony, Chroma avo dia avo!
Pigmenter fluorescent Uv ho an'ny fanontana anti-falsification
Pigmentera UV fluorescent tenanytsy misy loko, ary rehefa avy mifoka ny herin'ny hazavana ultraviolet (uv-365nm na uv-254nm) dia mamoaka haingana ny angovo ary mampiseho vokarin'ny fluorescent miloko mazava. Rehefa esorina ny loharano maivana dia mijanona avy hatrany izy ary miverina amin'ny fanjakana tsy hita maso tany am-boalohany.
Thermochromic pigment ho an'ny thermochromic Paint Thermochromic Ink Thermochromic Fabric
Voninkazo Themochromicdia misy micro-capsules izay miova loko miovaova. Rehefa atsangana amin'ny maripana voafaritra ny maripana, dia miova loko na tsy misy loko (na avy amin'ny loko iray mankany amin'ny loko hafa) ny pigment. Miverina amin'ny loko tany am-boalohany ny lokony rehefa milamina ny lokony.